The Towers of Florence, marika sy fomba fijery | Vaovao momba ny dia
The Towers of Florence, marika sy fomba fijery
Mariela Carril | | Florencia, Inona no ho hita
Florencia Io no iray amin'ireo tanàna mpizahatany indrindra eto Italia ary tsy azonao hadino izany amin'ny dia iray, fa ny tena marina dia tsy ho ampy ny fitsidihana tokana. Raha tsy afaka mijanona herinandro ianao dia eny na eny tokony hiverina ianao satria misy be eto amin'ity tanàna ity izay heverina «tranombakoka misokatra".
Anisan'ireo fiangonana, lapa ary tranombakoka misy tilikambo miafina izay manome antsika fomba fijery vaovao momba ity tanàna taloha ity ary izany no antony anolorako hevitra anao hitsidika azy ireo. Tsy manokatra varavarana mandavantaona ry zareo, ka ny fotoana mety hahalala azy ireo dia izao, rehefa mirehitra ny fahavaratra any Italia. Andao hojerentsika hoe inona ireo tilikambo fiambenana mahafinaritra an'i Florence.
1 Ny Tilikambon'i San Niccolò
3 Baluardo hatrany San Giorgio
Ny Tilikambon'i San Niccolò
Ity iray ity io ihany no tilikambon'i Florence izay tsy "voaravaka", izany hoe mampidina ny haavony. Ny sasany, amin'ny fotoana sasany amin'ny tantara, dia niharan'izany karazana fanapahana izany. tilikambo dia any Piazza Poggi no misy y dia naorina tamin'ny 1324 miaraka amin'ny hevitra hiarovana ny distrikan'i Oltrarno, noho izany dia ampahany amin'ny rindrina fiarovana. Androany dia rafitra mitokana izy io.
Niorina tamin'ny sarin'i Arnolfo di Cambio, mpanao mari-trano italianina ary mpanao sary sokitra tamin'izany fotoana izany izay niandraikitra ny Palazzo Vecchio na ny Basilica Santa María del Fiore, ao amin'io tanàna io ihany. nefa manana catwalk mahafinaritra ary ny birao fizahan-tany any an-toerana dia namerina azy io ary nanao izay hahalavorary azy mba hahafahan'ny mpizahatany mandeha azy tsy misy olana.
Manana dingana 160 izy io any ambony ary rehefa tonga any ianao dia mankafy a 360º fahitana an'i Florence.
Ny zavatra voalohany hitanao ao amin'ny Piazzale Michelangelo sy ny manodidina ny layout an-tanàn-dehibe sy ny ony Arno. Ny fafana avaratra dia misy andohalambo ary misy varavarankely enina mitsangana ary ny atsimo atsimo dia misokatra kokoa, misy tohana goavambe telo, ny iray ambonin'ireo iray hafa. Nisokatra ny tilikambo tamin'ny 24 Jona, izay no voalohany amin'ny tilikambon'i Florence izay nisokatra tamin'ity vanim-potoana 2017 ity.
Eo anelanelan'ny 24 Jona sy 31 Aogositra dia hisokatra isan'andro manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 hariva. Avy eo dia hisokatra ny volana septambra manontolo eo anelanelan'ny 4 sy 7 hariva. Ny fitsangatsanganana voatondro dia isaky ny antsasak'adiny.
Ity tilikambo ity dia miorina eo akaikin'ny ony Arno ary tsarovy ny toerana nanoratan'ny tanàna ny volany satria ny rano amin'ny renirano dia nampiasain'ny marotoa hamolavola ny volafotsy. Ity tilikambo ity koa no tilikambo mpiaro farany tany Florence amin'ny ilany atsinanan'ny tanàna, tilikambo izay nanidy ny rindrina taonjato maro lasa izay.
Niorina izy io hiarovana ny Ponte Reale, tetezana iray izay hatsangana aorian'ny tondra-drano mahery vaika nandrava ny tanàna tamin'ny taona 1333. Fa ny marina dia tsy vita velively ilay tetikasa ary navela tsy nisy tetezana ilay tilikambo. Androany aza dia manirery izy satria tavela eo afovoan'ny fihaonan-dàlana ao amin'ny Piazza Piave. Tamin'ny 1532 dia nampidinina avo hatramin'ny haavony ankehitriny 25 metatra.
Tamin'io taona io ihany dia niditra tao amin'ny Fort Fort Baluardo di Mongibello, nasain'i Alessandro de'Medici nanatsara ny fiarovana ny tanàna. Vetivety dia nanomboka nantsoina ilay tilikambo Ilay Zeka (Zeka dia manondro ny fanaovana an-tsoroka ny vola madinika ary tamin'ny farany dia niasa tao anatiny). Rehefa mitsidika ny tilikambo ianao anio dia lazain'izy ireo aminao ny fomba niasan'ny tantanana tamin'ny kodiarana nify noho ny rano tamin'ny renirano izay namakivaky ny tionelina sy ny habakabaka ambanin'ny tilikambo.
Ny tunnels rehetra dia mbola misy fa tsy azonao atao ny mitsidika azy ireo fa ny fiasan'izy ireo ihany no ambarany anao. Ary misy ihany koa ny tionelina iray izay mampifandray ny Torre della Zecca amin'ny Porta San Niccolò izay tondra-drano hatrany ary mazava ho azy fa tsy misy olona afaka mitsidika. Na izany na tsy izany, inona nanomboka ny taona 2014 ny asa fanarenana amin'ny vidiny 300 euro ary naharitra 18 volana ka ankehitriny dia afaka mahita ilay tilikambo toa ny taonjato maro lasa izay.
Nanokatra ny varavarany tamin'ny fahavaratra izy io ary mazava ho azy, avy any ambony dia manana indray ianao 360 ° views of Florence. Miakatra ianao ary avy amin'ny rihana fahefatra dia manana ny fomba fijerinao tsara indrindra ny Palazzo Vecchio, ny Synagoga, ny Duomo na ny Piazzale Michelangelo, ohatra. Hitanao any Piazza Piave izy ary Nisokatra tamin'ny 15 Jona izy tamin'ity taona ity ary hataoko indray amin'ny 19 Aogositra eo anelanelan'ny 5 sy 8 hariva.
Hisokatra ihany koa ny 16 septambra manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 hariva ary ny 14 Oktobra manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 6 hariva miaraka amin'ny fitsangatsanganana isaky ny antsasak'adiny.
Baluardo hatrany San Giorgio
Izy io dia ampahany amin'ny fiarovana ara-tantara an'i Florence ary a rafitra trapezoidal eo amin'ny rindrina akaikin'i Porta San Giorgio, ao atsimo andrefan'ny tanàna. Cosimo I de Medici, Grand Duke of Tuscany, no nanorina azy tamin'ny 1544 teo amin'ny iray amin'ireo lampihazo namboarin'i Michelangelo Buonarroti izay navela hatramin'ny tanàna ka hatramin'ny 1529.
Ny tanjona dia ny fanatsarana ny fiarovana ary izany no antony namoronany seta taorian'ny fananganana efa nanjavona nefa nisy rindrina matevina sy artillery etsy sy eroa. Androany ny toerana Izy io dia ny foiben'ny Balestrieri Fiorentini, ireo lehilahy izay mandray anjara amin'ny Calcio Storico Fiorentino Procession miakanjo amin'ny fomba medieval, mifaninana amin'ny Festival Palio.
Misokatra ny tilikambo manomboka amin'ny 8 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 hariva, ary ny 9 septambra manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 hariva ary amin'ny 7 Oktobra, miaraka amin'ny torolàlana isan'ora.
Vavahady atsimo amin'ny tanàna io ary mamela anao handeha mamaky ny ampahan'ny rindrina medieval. Any amin'ny distrikan'i Oltrarno izy io ary mijanona eo amin'ny sampanan-dalana amin'ny arabe maromaro. Ny varavarana taloha dia nanana toerana ampy ho an'ny kalesy sy mpandeha an-tongotra namaky ny vavahady. Mbola eo ny vavahady vy ary io ihany no fresco miaraka amin'ny Virjiny sy ny olona masina.
Ao anatiny dia misy takelaka marbra roa mankalaza ny fidirana tany Florence an'ny Papa Leo X, ny iray ary ny fidiran'i Charles V, ny iray hafa. I Florence, toy ny tanàna medieval rehetra, dia niova foana ary ny fiarovana dia lohahevitra iray nampatahotra ireo mpitondra azy, ka isaky ny mihalehibe ireo rindrina dia very ireo trano antitra. Izany no nitranga tamin'ny fiangonana iray izay tao nanomboka tamin'ny 1068 ary nosoloana fiangonana iray hafa izay mijoro ankehitriny.
Misokatra inefatra isan-taona i La Porta Romana Ary koa: ny 22 Jolay ka hatramin'ny 26 Aogositra eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 8 hariva, ny 23 septambra hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 7 hariva ary ny 21 Oktobra hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 6 hariva. Ny fitsangatsanganana voatondro dia isaky ny antsasak'adiny.
Tsy lazaina intsony fa ireo tilikambo efatra ireo dia tsy hoe mahafinaritra fotsiny noho ny tantaran'izy ireo sy ny fahagolan'izy ireo: manolotra anay izy ireo Fijerena panoramika mahafinaritra amin'ny tanàna iray tsy hay hadinoina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Florencia » The Towers of Florence, marika sy fomba fijery
Antony hisafidianana toerana ambanivohitra amin'ny fialan-tsasatrao